Banyere Anyị - Shenzhen Huyssen Technology Co., Ltd.
SMP 5V dị obere
SMPS dị obere 24V
Eguzosie ike na 2011, Huyssen ike na-agba mbọ ịbụ onye na-eweta ihe ngwọta ike ka mma. Ahịrị mmepụta anyị gụnyere ọkụ ọkụ AC-DC, ọkụ ọkụ DC dị elu, ihe nkwụnye ọkụ, chaja ngwa ngwa, ụdị 1000+ zuru oke.
Huyssen ike n'ụzọ zuru ezu ike na-enye elu-edu ike ọkọnọ, ha nwere ike na-eji na ọtụtụ puku ngwa dị iche iche gụnyere electronic ngwá, n'ichepụta, igwe, usoro akara, factory automation, chemical nhazi, telekomunikashions, nlekota usoro, audio, sayensị nnyocha, aerospace. , EV ụgbọala, netwọk, LED ọkụ, wdg Anyị ike onunu nwere ntụkwasị obi na ogologo oge ojiji, functionality.Though na-eri bụ akụkụ dị mkpa, ma ọ bụ ntụkwasị obi nke dị iche iche n'ezie elu ngwaahịa.
Ka ọ dị ugbu a, ike ọkọnọ ike mmiri IP67 anyị, na-ekpuchi 12W ruo 800W, yana asambodo nchekwa zuru oke, enwere ike iji ya mee ihe n'ọtụtụ ọkụ ime ụlọ & n'èzí LED.
Gbanwee ike ọkọnọ, na-ekpuchi 12W ka 2000W nke na-na ezi sekit mbadamba na oké arụmọrụ, nwere ike tinye n'ọrụ smart ngwaọrụ, n'ichepụta, igwe, ụlọ ọrụ, ọkụ, wdg. Ọkụ ọkụ DC, na-ekpuchi site na 1500W ruo 60000W. Anyị na-akwado ike dị elu ahaziri ahaziri na nkọwa ndị ọzọ pụrụ iche na arụmọrụ dị elu, ọrụ dị mfe, ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, asọmpi dị ukwuu.
Ndị ahịa PD ngwa ngwa chaja, ụfọdụ ụdị ejiri teknụzụ gallium nitride (GaN), ghọtara "obere nha, nnukwu ike", zute mkpa ndị ahịa na-achọ kwa ụbọchị na obere ibu.
Lekwasị anya na R&D na nrụpụta na ụlọ ọrụ ọkọnọ ike maka afọ 15
2 ụlọ ọrụ 6 ụlọ ọrụ
30+ mba asambodo
Emebere ngwaahịa anyị niile ka ha nwee ike iru ụkpụrụ nchekwa zuru ụwa ọnụ. A na-echekwa ogo na njikwa usoro mkpuchi site na iji usoro nyocha na usoro nyocha dị iche iche n'oge usoro nrụpụta. Ke adianade do, niile ngwaahịa kwesịrị ịgafe a rigorous ọkụ-na na n'ụzọ zuru ezu akpaghị aka ikpeazụ ule tupu shipment.We nwere abụọ mmepụta bases, otu na Shenzhen na ndị ọzọ na Dongguan, na-adọ nnyefe.
Ọzọkwa, Huyssen ike na-enyekwa ọrụ imewe iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ihe nlereanya dabara adaba na katalọgụ anyị, ndị otu R&D nwere ahụmahụ nwere ike chepụta ọkụ ọkụ emere nke ọma iji gboo mkpa gị. N'ihe karịrị afọ 22 nke ahụmịhe imewe R&D na ụlọ ọrụ na-enye ọkụ eletrik, anyị na-enye gị azịza zuru oke ma ọ ga-amasị gị ịbụ onye mmekọ ike ogologo oge.
Nkwanye ike Dc, mgba ọkụ mode ike ọkọnọ, Nnweta ike mmemme, Na-eweta ọkụ ọkụ Led Strip, Nnyenye ike na-agbanwe agbanwe, Nweta ike ahaziri ahazi,